မီးလောင်မှုသတင်း Archives - Page 10 of 146 - Myanmar Fire Services Department
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ (၃၁)လမ်း(အပေါ်ဘလောက်)တွင် တိုက်ခန်းမီးလောင်မှုသတင်း
editor | Dec 19, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၇ ၂၁ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ (၃၁)လမ်း (အပေါ်ဘလောက်)၊ အမှတ်(၂၁၀)၊ (၁၀x၅၀)ပေ RC(၂)ခန်းတွဲ(၇)ထပ်တိုက်၏ (၄)လွှာ(ယာ)ဘက် တိုက်ခန်းနေ အိမ်ရှင် ဦးတင်မြင့်၏ (၈x၈)ပေ၊ အထပ်သားကာထားသောအိပ်ခန်းအတွင်း...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ လက်ပံကျေးရွာရှိ ငမိုးရိပ်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း ရှင်းလင်းဆောင် မီးလောင်မှု ....
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၆၃၀ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ လက်ပံကျေးရွာ၊ အဝိုင်း-မလစ်ကျေးရွာပတ်လမ်းဘေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ငမိုးရိပ်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းရှိ ရှင်းလင်းဆောင်...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ငှက်အော်စမ်းကျေးရွာ အနောက်ပိုင်းရှိ မြေစိုက်တဲတွင် ကော်စေးပြားများမီးလ ....
editor | Dec 16, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၅ ၁၀ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ငှက်အော်စမ်းကျေးရွာ အနောက်ပိုင်းနေပိုင်ရှင် ဦးမင်းဇော်ဦး၏ (၈ x ၁၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ သွပ်ကာ၊ မြေစိုက်တဲတွင် ဖွဲမီးဖိုဖြင့် ကော်စေးပြားများ မှိုင်းတိုက်ရာမှတစ်ဆင့် အပူလွန်ကဲ၍ ကော်စေးပြားများသို့...
House fire at the Hakha township, Chin state
editor | Dec 14, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
Dec 13 2020, at about 17 00,afire occurred at the house (20’x40″) owned by U Htawhe in Lauklon village, Lauklon village tract, Haka township, Chin state. It was investigated that the fire started from the electric rice cooker. At 17 05,5fire fighters...
Page 10 of 146« « Previous...89101112...203040...Next »